सङ्गठन गठन ! - माडी खबर
सङ्गठन गठन !
माडी खबर calendar_today १७ भाद्र २०७८, 3:27 am
हामी महान यात्रामा छाै सङ्ठन गठन पुर्ण गठन धमाधम हुँदै अनुशासन विहिन फुटपरस्तहरु धापट लगाएका छाै ।
महान शहिदहरुकाे राताे सान याे राताे झन्डा आकाशमा फरफराएका छन र अनुशासन बिहिनहरुलाई परास्त गरिरहेका छाै ।
याे राताे झन्डासँगै श्रमजीवीहरुकाे एकमना दराे एकताको एकताका मुटठि कसेका हातहरु आकाशमाथि उठिरहेका छन ।
संगठनलाई गठन पुर्णगठन धमाधम चलि रहदा फुटपरस्तहरु नाङगिनु परिरहदा धर्ती मै उनिहरु अलमल परिरहेका छन ।
फुटपरस्त अनुशासन विहिनहरुले सङ्गठन नै दक्षिणपन्थी दिशामा गएको आराेप लगाई रहदा उनिहरु ” मद्दमपन्थि ” गुटसँग सम्बादमा जुटिरहेका हुन ।
क्रान्तिकारि भजन मात्र गाईरहेका हुन तर उनिहरु क्रान्तिलाई भाेज भतेर बनाएर संगठन सखाप पार्न लागेका हुन ।
हामी क्रान्तिलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद माओबिचारधारा सिद्धान्तको ठाेश आधारमा हाँकेका हाै ।
हामी संगठन बिस्तारकाे महान यात्रामा कुदि रहदा र संगठन गठनपुर्ण गठन गरि रहदा फुटपरस्त अनुशासन बिहिनहरु घिर्णाकाे पात्र बनिरहेका हुन ।
जनक विसी, प्युठान